Soo dejisan Simple Disable Key 12.3 – Vessoft
WindowsNidaamkaKordhintaSimple Disable Key
Bogga rasmiga ah: Simple Disable Key
Muujinta Muujinta fudud – waa software si aad u joojiso ama u dhaqaajiso furayaasha loo cayimay kumbuyuutarka. Nidaamku wuxuu awoodi karaa inuu furaha furo ama isugujiro, oo ay ku jiraan furayaasha kumbuyuutarrada sida "Ctrl", "Sub", "Shift", "Windows", iwm. ikhtiyaarada naafanimada leh: marwalba, markaad codsiga qaadato, sida ku qoran jadwalka. Software-ka ayaa xayiray isticmaalka furaha isticmaalka faylka la fulin karo ama wakhtiga la dhigay iyo maalmo cayiman. Muujinta Hantida ee fudud waxay ku dareysaa dhammaan furayaasha naafada ah liiska aad ka bedeli karto qaabka naafanimada oo aad u aragto furayaasha la isku xidho iyo isku dhafka. Muujinta Hoosaadku waxay sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad habaynta si toos ah u tirtirto furayaasha la soo xulay ka dib marka Windows bilaabanto, ama jebiso ama furfuro furaha gacanta ee kaabiga nidaamka.
Kajinta furaha iyo furaha muhiimka ah
Ka horjoogsiga isticmaalka furaha barnaamijyada
Furitaanka furayaasha jadwalka
Kalsooni la’aan nalalka furayaasha ka dib markii la bilaabay Windows
Soo dejisan Simple Disable Key
Faallo ku saabsan Simple Disable Key
Simple Disable Key Xirfadaha la xiriira